टीकापुरमा संक्रमितको चाप- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
लक्षण भएका धेरै छन् तर समयमै परीक्षण हुन सकेन
वैशाख ३०, २०७८ गणेश चौधरी
कञ्चनपुर — कैलालीको टीकापुर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको छैन । चिकित्सकहरू अझै २/३ साता संक्रमित र मृत्युदर बढ्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।
कैलालीको टीकापुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढेपछि बरन्डामा उपचार गराइरहेकाहरू । १५ शय्याको अस्पतालमा बुधबार ३९ जना संक्रमित थिए ।तस्बिर : गणेश चौधरी
टीकापुर अस्पतालमा कार्यरत कोरोना फोकल पर्सन डा. रमेश उपाध्यायले कोरोना समुदायस्तरमै फैलिएको र संक्रमणको अवस्था भयावह भइसकेको बताउँछन् । ‘दुई साताअघि नै कोरोनाका लक्षण भएका केसहरू आउन सुरु भएको हो,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘तर समयमै कोरोना जाँचको राम्रो प्रबन्ध भएन । आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था पनि भएन । समुदायमा भयावह रूपमा फैलियो ।’
टीकापुर नगरपालिका–८ का धनसिंह साउद सरकारले गत वर्षको जस्तो सजगता नअपनाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘भारतबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नेलगायतका काम भएन ।’
समुदायमा कोरोनाका लक्षण भएका बिरामी भए पनि गम्भीर नभएसम्म घरमै रहने गरेको डा. उपाध्यायले बताए । ‘घरमा थेग्न नसकेर सिरियस भएर मात्र बिरामी अस्पताल आउँछन्,’ डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘अस्पताल आएकामध्ये २५ प्रतिशत जति बिरामी क्रिटिकल अवस्थाका छन् ।’ १५ शय्या क्षमताको अस्पतालमा हाल ३९ संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव पनि उत्तिकै छ । ‘अक्सिजनको ब्याकअप नहुँदा बिरामीको ज्यान जाने गरेको छ,’ डा. उपाध्यायले भने । समुदाय स्तरमा फैलिए पनि परीक्षण भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । टीकापुरमा कोरोना परीक्षणका लागि संकलित स्वाब धनगढी पठाउनुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन कम्तीमा एक साता लाग्ने गरेको छ । कोरोनाको लक्षण भएका धेरै छन् तर समयमै परीक्षण हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७८ ०८:५६
यार्चा टिप्न गएका २ को मृत्यु
रुकुम पश्चिम — डोल्पाका पाटनमा यार्चा टिप्न पुगेका अर्का एक जनाको मृत्यु भएको छ । यसअघि एक किशोरको मृत्यु भएको थियो । जगदुल्ला गाउँपालिकाको जगदुल्ला पाटनमा रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–७ का २७ वर्षीय कुमार खत्रीको लेक लागेर मृत्यु भएको हो ।
उनी आफ्ना बुबा मानबहादुर खत्रीसहित पाँच महिनाअघि काठको काम गर्न जगदुल्ला आइपुगेका थिए । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यस वर्ष पनि पूर्णरूपमा बन्द गरिएको पाटनमा अवैध रूपमा उनी पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । खत्री लेक लागेर सिकिस्तै बिरामी परेपछि उपचारका लागि बोकेर काइगाउँ स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याइएको थियो । उनको स्वास्थ्यचौकीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले बताए ।
यसअघि जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–३ का १७ वर्षीय सुमन रावलको लेक लागेर मृत्यु भएको थियो । वैशाख १७ गतेको सर्वदलीय बैठकले जेठ १० गतेदेखि यार्चा संकलन खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना महामारी बढेको भन्दै वैशाख २६ गतेको बैठकले यार्चा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । डोल्पाका झन्डै २ सय पाटनमा यार्चा पाइन्छ ।